Raharaha mpanjifa - Laizhou Dongsheng Valve Co., Ltd.
Ny Silent Check Valves dia naondrana tany Italia nanomboka tamin'ny taona 2005
Ny mpanjifa dia marika valva fanta-daza any Italia, izy ireo no fiaraha-miasa maharitra ho an'ny mpanjifa mihoatra ny folo taona, nividy tsy tapaka sy nividy valva mangina sy valva hafa, anisan'izany ny isan'ny flange silent check. valves nasaina no be indrindra.
Ny valin-tenin'ny mpanjifa: "Tena tsara ny kalitaon'ny valva fanamarinanao, indrindra fa ny fotoana fanaterana dia tena mifanaraka amin'ny zavatra takinay. Tena afa-po ny mpanjifanay. Tena afa-po amin'ny serivisy aho ary manantena fa afaka manitatra ny vokatrao ianao mba hihaona aminay bebe kokoa. fepetra takian'ny valve amin'ny ho avy.Misaotra."
Naondrana tany Espaina hatramin'ny taona 2006 ny Valve Check Plate Dual
Ny mpanjifa dia avy any Espaina, mpivarotra marika malaza eo an-toerana, nihaona taminay tao amin'ny fampirantiana.Izy ireo no mpanjifanay efa ela izay nividy ny valizy fisavana takelaka roa.
Fanehoan-kevitry ny mpanjifa: "Ny kalitaon'ny valva fisavana takelaka roa dia tena tsara foana, miaraka amin'ny antoka avo lenta sy ny fotoana fandefasana tsara indrindra. Misaotra anao"
Ny Ball Check Valves dia naondrana tany Holandy nanomboka tamin'ny 2007 ka hatramin'izao
Ny mpanjifa dia marika valve malaza any Holandy.Nihaona tao amin'ny Foara Amsterdam izahay.Izy ireo no mpanjifanay efa ela nandritra ny 10 taona mahery, ary tsy nitsahatra nividy ny valva fanaraha-maso ny baolina sy ny valva hafa.
Tany am-piandohan'ny taona dia tsy dia nisy ny famokarana an-trano ny valva fanaraha-maso baolina.Namokatra azy ireo aloha be ny orinasanay.
Fanehoan-kevitry ny mpanjifa: "Tena tsara ny valva fanaraha-maso ny baolinao, fanomezan-toky ny kalitao tsara, ny fotoana fanaterana dia ao anatin'ny faritra mety indrindra. Miandrandra ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana bebe kokoa amin'ny ho avy."
Naondrana tany Afrika nanomboka ny taona 2008 ka hatramin’izao ny Valve Diaphragm
Avy any Afrika ny mpanjifa ary tompon'andraikitra amin'ny tetikasa fitrandrahana.Izy ireo no mpanjifa tsy tapaka izay niara-niasa taminay nandritra ny folo taona mahery.Nividy valva diaphragm izahay tsy an-kijanona sy tsy tapaka.
Ny valin-tenin'ny mpanjifa: "Ny valva diaphragm dia tsara foana ary mety tsara amin'ny asa fitrandrahana ataonay. Tena faly aho amin'ny serivisy ataonao. Manantena izahay fa hanohy ny fiaraha-miasa tsara amin'ny ho avy."
Ny Valves Butterfly dia naondrana tany Filipina tamin'ny Jolay 2020
Avy any Philippines ilay mpanjifa ary vao nanomboka nivarotra izy.Hividy valva lolo kely maromaro izy ary hametraka izany eny an-tsena ho an'ny fampandrosoana ny tsena.Eo amin'ny vidiny dia nanome fanohanana be dia be ny mpanjifanay ary tena mankasitraka anay izy.
"Ny valva lolo dia tsara ary tsara ny kalitao. Misaotra. Mbola atolotro eny an-tsena izy io. Satria be dia be ny valva mora kokoa. Fa ny kalitao dia tsara. Tsara kokoa noho ny azy ny valva. Andraso ny commande be dia be ao. ny ho avy."
Ny valva vavahady dia naondrana tany Malezia tamin'ny Mey 2017
Mpizara eto an-toerana avy any Malezia ny mpanjifa, ary misy orinasa roa miasa.Tamin'ny taona 2017 dia nanao tetikasa injeniera amin'ny vavahady izy ireo.Nikaroka ny Laizhou Dongsheng Valve Co., LTD tamin'ny alàlan'ny tranokala ny mpanjifa.Noho ny habetsahana sy ny isan-karazany ny fepetra arahana, ny fifampiraharahana dia nandeha nandritra ny fotoana ela, fa tamin'ny farany dia nahatratra ny fiaraha-miasa tsara amin'ny mpanjifa noho ny fahaiza-manao sy ny kalitao avo.
fanombanana ny mpanjifa:
"Ny valva vavahadin'ny DSV dia manana kalitao tsara, raharaham-barotra matihanina ary mifanandrify amin'ny fotoana fanaterana. Ny serivisy aorian'ny varotra dia tena mahafa-po ho anay sy ny mpanjifanay. Miandrandra ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa hafa amin'ny vavahady izahay amin'ny ho avy."